Toerana Be Mpitsidika Ireo Toerana Misy ‘Haikanto’ Tsy Mahazatra / Maningana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2017 13:33 GMT
Vakio amin'ny teny नेपाली, Español, Português, srpski, русский, English
“Narita hot dog dude” an'i Joi Ito mpampiasa Flickr. Sary ampiasàna lisansa Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0).
Bilaogera iray antsoina hoe bluebluelucky ao amin'ilay tranonkala fanangonana, Naver Matome, no nanangona avy any amin'ny media sosialy manerana ny firenena ny sasantsasany amin'ireo “haikanto” hafahafa indrindra ao Japàna. Amin'ny ankapobeny dia goavana ireo sarivongana asongadiny izay tsy dia zavakanto sy manana tanjona mazava loatra, araka ny lazain'ny bluebluelucky:
Rehefa mivenjivenjy manerana ny tanàna, indrindra any amin'ireo kianja sy toerana filalaovana, mazàna ianao no mahita “haikanto” hafahafa. Teo ampanontaniana tena momba ny hoe iza sy ny hoe natao ho amin'ny inona izy ireny, dia nanangona sary vitsivitsy aho, na tsy mbola azoko antoka aza ny ho valiny.
Somary mandraikiraiky ireo sarivongana, mazàna no mampitolagaga, ary indraindray somary toa mandrahona kely izany :
Ity misy tatitra iray avy amin'ny dianay ♫: (Kawaguchi Athletic Park) Mahatsiravina ny mahita ilay panda mitsako volobe. Na tsy maro aza ny olona tonga mivahiny mba hijery io panda io taorian'ilay horohorontany tamin'ny 2007 tao Niigata, noho ny seho iray tamin'ny fahitalavitra izay nampiditra ny momba io panda io dia mitombo hatrany ny olona tonga hijery (indray) azy io.
Ity sarivongana iray manokana ity (toa paompy aminà lavadrano no fijery azy) dia heverina ho mitovy amin'i Doraemon, ilay endrika malaza be amin'ny sarimiaina ao Japàna, saingy, toy ny mahazatra amin'ireo sarivongana eny amin'ny toerana filalaovana ao Japàna, misy zavatra kely hafahafa foana:
Betsaka zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny amin'ìty haikanto iray (?) eto amin'ny kianja eto an-toerana ity.
Tsy mahagaga intsony ny mahita biby hafahafa any amin'ireo kianja sy toerana filalaovana ao Japàna :
— もっきゅ🍵🎀 (@mokkyu09) July 2, 2014
Havendranana tanteraka ity liona eto amin'ny kianja eto an-toerana ity!
Indraindray misy fitaovana sy haikanto kidaladala izany eny amin'ny toerana filalaovana sy kianja!
Ireo toerana fitodian'ny mpanao fizahantany ambanivohitra ao Japàna koa dia mety ahitàna sarivongana maningana (ary mety hampahatahotra aza ny sasany) :
Kianja Miyamidori, Miyazaki: Somary akaiky an'ireo Havoanan'i Ikoma, misy ny toerana fisakafoanana mpikarakara henan-dambo tsara indrindra dia ao Japàna. Misy ihany koa ny kianja natao ho an'ny daholobe, faran'ìzay tena mampihoron-koditra indrindra. tsy azoko antoka na avy amin'ilay olona mpitantana ny kianja tany aloha tany, fa eo ivelan'ilay toerana fisakafoanana dia misy sarivongana goavana ahitàna ny Prince Osu sy reny iray ary zazakely iray, miampy lambo dia iray. Samy efa nolazoin'ny toetrandro daholo koa ireo sarivongana rehetra.
Hita tao anatin'ny Kianja Miyamidori. Ity no kianja nahazatra sy faran'izay nampivarahontsana indrindra tao Japàna ary efa nakatona amin'ìzao fotoana izao. Ry akama, naniry ny handeha tao amin'izany kianja izany aho.
Sarivongana vita tamin'ny alimo ity, hita tao amin'ny tanànan'i (trimobe) Oni-Kita, ao Uwa, Prefektioran'i Ehime! Raha teo am-pahitàna azy io aho tamin'ny fahitalavitra, tena akaiky kely, fa tena milentika an-tsaina tokoa, hahaha. Akoholahinala iray no miantona eo an-tsorok'ilay trimobe.
Ohatra tsara amin'ireo zavatra foromporonina tena tafiditra be ho ampahan'ny kolontsaina Japoney ny sasany amin'ireo haikanto :
静かな狂気を感じる公園のオブジェ#taipei https://t.co/w7lnPi5FYf pic.twitter.com/JlFTiTi607
Haikanto iray miteraka fihetsehampo somary kidaladala.
Ny sasany aza toa maningana fotsiny izao.
Nandeha tany amin'ny Toki Premium Outlet Mall ao amin'ny Prefektioran'i Gifu aho. Misy haikanto iray hafahafa eo akaiky eo izay tsy vitanao ny tsy hàka sary miaraka aminy. Antsoina hoe KAGUYA-SYSTEM. Mampitsangam-bolo ahy izy io.
Raha ny marina, maro amin'ireo mpitsidika an'i Japàna no azo eritreretina ho nifanehatra tamin'ilay haikanto faran'izay malaza indrindra ao amin'io firenena io, fantatra amin'ny anarana hafa hoe “the hot dog guy“:
Misy haikanto tena mampivoraka tanteraka eo am-pahatongavana ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Narita (any ivelan'i Tokyo).
Jereo misimisy kokoa ireo haikanto japoney maro tsy mahazatra ao Naver Matome.